ရှမ်း(မြောက်ပိုင်း) – Page 10 – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ” People Talk” ပြည်သူ့စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ၅.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်က သီပေါမြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့. လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပါတီနှင့်အသင်းအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူအချို့မှ မြို့နယ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ ပေါင်းစည်းပါဝင်နိုင်ရေး အကြံပြု ဆွေနွေးကြပါသည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကလည်း ပြည်နယ်ကော်မတီ ဦးစိုင်းစိန်လင်းမှလည်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းမြောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်မြင့်ဌေးနှင့် ပါတီကော်မတီဝင် များသည် ယနေ့ နံက် (၁၀း၃၀)တွင် လက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု ရေပူအင်း ကျေးရွာရှိ ပါတီဝင်အသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကျေးရွာ ရှိ မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီမှ မတည်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တွဲဘက် အမက ကျောင်းဆောင် အတွက် လိုအပ်ချက်များ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ညှိနှိုင်း ခဲ့ကြပါသည်။
ကျောက်မဲမြို့ ( ၈ ) ရပ်ကွက် သန္တိသုခဓမ္မာရုံတွင်အောင်မင်္ဂလာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရဟိတအသင်း နှင့် ဇီဝိတလူမှုကူညီရေးအသင်းတို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အခမဲ့ အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း မှ ယနေ့ ၂၀၁၈ မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သံဃာတော်များအပါအဝင် လူနာပေါင်း ၂၁ ဦး ကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် ။
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ မေ (၉) ရက်နေ့ နယ်မြေကွင်းဆင်း ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ရွက်မှုများ
မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ ဦးဇော်လွင်သည် မေ ၉ ရက်နံက် ၁၀ နာရီအချိန်က မြို့မရပ်ကွက်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်မည့်မြေနေရာအား ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့်မြေနေရာရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။.
နေ့လည်(၁၂)နာရီအချိန်တွင် မြို့နယ်ကော်မတီဝင် ဦးခင်မောင်ရွှေနှင့်အတူ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရုံးသို့ သွားရောက်ပြီး ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာအေးတင့်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး စီပိန်းကျေးရွာနှင့် တုံကွာကျေးရွာအကြားရှိ ပျက်စီးနေသောတံတားများ ပြုပြင်ပေးရေးညှိနှိုင်းခဲ့ရာ တံတား ၅ စင်းအား မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါသည်။
ညနေ ၄ နာရီအချိန်ကကုန်းခါးရပ်ကွက် နမ့်ပေါ်ချောင်းကမ်းပါး ရေတိုက်စားမှုပြုပြင်ရန်အတွက် ဆည်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာ ဦးတင်မင်းဌေး ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်ဝင်းတို့နှင့်အတူ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
မိုးမိတ် မတ် ၂၅
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဆိုင်း၊ ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစိုင်းခမ်းကော်၊ ပြည်နယ်ကော်မတီဝင် ဒေါက်တာမောင်တီ၊ မိုးမိတ်ခရိုင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမြင့်နှင့် ကော်မတီဝင်အဖွဲ့သည် မိုးမိတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့သည်။
မဘိမ်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ရပ်/ကျေးပါတီ ကော်မတီအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မိုးမိတ်ခရိုင်၊မဘိမ်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြုးပါတီရုံးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဆိုင်း၊ ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစိုင်းခမ်းကော်နှင့် ပြည်နယ်ကော်မတီဝင် ဒေါက်တာမောင်တီ၊ မိုးမိတ်ခရိုင်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုးမြင့် နှင့် ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်လှိုင်တို့အဖွဲ့သည်
ယနေ့ (၂၃-၃-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီ အချိန်တွင် ပါတီနာယကနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့များ မြို့နယ်ပါတီ ကော်မတီဝင်များ ရပ်/ကျေးပါတီ ဥက္ကဌနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့များအား လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း လူငယ်ရေးရာ၊ သတင်းမီဒီယာကိစ္စ ရပ်များကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။